टूटेको सम्बन्धको लागि प्रार्थना | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना टूटेको सम्बन्धको लागि प्रार्थना
हितोपदेश २:::: विश्वासयोग्य साथीको चोटहरू हुन्; तर दुश्मनको चुम्बन छली हुन्छन्।
तपाईंको प्रियजनले तपाईंको मुटु भाँच्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? विशेष गरी जब तपाईको सबै दिमाग पहिले नै विवाहको वरिपरि केन्द्रित थियो र अचानक सबै, व्यक्ति बिदाइ नगरी तपाईको जीवनबाट बाहिर निस्के। के तपाई यस बारे खुसी हुनुहुन्छ? एक मान्छे को प्रकृति को धेरै अनिश्चितता को द्वारा विशेषता छ कि किन मान्छे अप्रत्याशित छ।
कसरी तपाईंले कसैको साथ आफ्नो मुटु साझेदारी गर्नुभयो, कसैको लागि तपाईंको लागि मर्नुहुनेछ केवल एक बिहान उठेर तपाईंलाई निराश छोड्ने निर्णय गर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै औषधि वा एन्टिडोट छैन जुन त्यस्तो पीडालाई निको पार्न सक्छ केवल परमेश्वरको अनुग्रहले गर्न सक्छ। आज हामी टुक्रिएको सम्बन्धको लागि प्रार्थनामा हेर्नेछौं। धेरै पुरुष र महिलाहरू हृदय विच्छेदको कारण डिप्रेसनमा परेका छन्, त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जसले एक विकृत व्यवहार निर्माण गरेका छन किनकि उनीहरूले यति भरोसा गरे कि उनीहरूको मुटु भाँचियो।
जब मुटुको ब्रेक हुन्छ, समाजले आशा गर्दछ कि ती दुई पार्टीहरू जीवनको साथ अघि बढ्नु पर्छ। धेरै चोटि, जसको हृदय भाँचेको थियो उसको भावनालाई सधैं ध्यान दिइदैन। यस बीच, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले प्रेमलाई छोड्छन्, तसर्थ, तिनीहरूले कहिल्यै विवाह गर्ने वाचा गरेनन किनकि उनीहरू फेरि यस्तो दुःखदायी अनुभव अनुभव गर्न चाहँदैनन्।
कथाको अर्को पक्ष यो हो कि जब कुनै टुक्रिएको सम्बन्ध हुन्छ, कहिलेकाहिँ परमेश्वर हामीले पाठ सिकोस् भन्ने चाहनुहुन्छ वा उहाँसँग एउटा उत्तम योजना रहेको छ। उदाहरण को लागी, यदि दुई पार्टनरहरु परामर्श र अन्तर्विन्ती प्रार्थना पछि पनि खुशीयाली विवाह छैन भने, भगवान उहाँहरुको बिचमा एक भिन्नता को अनुमति दिन सक्छ जो भविष्यमा आउँदै गरेको विनाशबाट जोडीलाई बचाउन सक्छ। त्यसोभए, यो सबै बिग्रेका सम्बन्धहरू होइनन् जुन पूर्ण रूपमा खराब छन्, यदि एक मात्र मानिसले भविष्य देख्न सक्दछ।
तपाइँ सबैलाई थाहा हुनुपर्दछ कि उच्च अपेक्षाहरूले निराश हुनु भन्दा पहिले। जब कुनै व्यक्तिको आशाहरू कुनै चीजमा बढी हुन्छन्, निराशा टाढा हुँदैन। एक मान्छे को प्रकृति यस्तो छ कि यो सधैं उसलाई दुर्व्यवहार र निराश गर्न को कारण हुनेछ कि उनी निराश थिएनन्। उदाहरणका लागि, उत्पत्तिको पुस्तकले रेकर्ड गरेको छ कि भगवानले हृदयमा पश्चाताप गर्नुभयो कि उहाँले हाम्रो हातका कामहरूले गर्दा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। यदि एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान् परमेश्वरलाई हृदय विदारक गर्न सक्षम छ भने, मानिससँग कत्तिको सम्बन्ध?
यद्यपि, सबै चोटपटकको गहिराइलाई निको पार्ने ईश्वरसँग एक तरीका छ यदि हामी मात्र उहाँलाई हामीमाथि काम गर्न नचाहिने पहुँच दिनेछौं। टुक्रिएको सम्बन्धको कारण हृदय विच्छेद भोग्ने धेरै मानिसहरूलाई, यी तपाईंलाई प्रार्थनाका मद्दतहरू हुन् मद्दतको लागि तपाईलाई मुटुको ब्रेकको भावना हटाउन को लागी।
भाँच्ने सम्बन्ध त्याग्न Relations तरिकाहरू
१. निर्देशनका लागि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्: कुनै सम्बन्धमा जानुभन्दा पहिले कुनै गम्भीर सम्बन्धमा जानुभन्दा पहिले हामीले परमेश्वरको अनुहार खोज्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो प्रेम सम्बन्ध हो वा व्यापार सम्बन्ध। जब हामी उसको अनुहार खोज्छौं, उहाँले हाम्रो अनुहार लाज र मुटुबाट बचाउनुहुन्छ। धेरै इसाईहरू आज टुक्रिएको सम्बन्धबाट ग्रस्त छन् किनकि उनीहरूले त्यो सम्बन्धको सम्बन्धमा परमेश्वरको इच्छा जान्न चाहेनन्। सबै चमकहरू सुनका छैनन्, शैतान पनि प्रकाशको स्वर्गदूतको रूपमा देखा पर्न सक्छ, त्यसैले हामीले कुनै पनि सम्बन्धमा प्रवेश गर्नु अघि हामीले हेर्नुपर्दछ र प्रार्थना गर्नुपर्दछ।
२ समझशक्तिको वरदानको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्: समझशक्तिको वरदान आत्माको वरदान हो। यस उपहारले तपाईंलाई टाढाबाट खराबी गन्ध गर्न सक्षम गर्दछ। जब यो उपहार तपाइँको जीवनमा संचालित हुन्छ, तपाइँ गलत व्यक्तिलाई चिन्नुहुनेछ जब तपाइँको जीवनमा आउँदछ। प्रेरित १ 16 मा, पावललाई थाँहा थियो कि ती पछाडि अगमवाणी गरिरहेकी एउटी केटीलाई भविष्यवाणी गर्ने आत्मा थियो, त्यसैले उनी धोकामा परेनन्। साथै फरिसीहरू दुष्ट हुन् भनेर येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो, जबकि अरूले उनीहरूलाई परमेश्वरको घनिष्टको रूपमा हेरेका थिए, येशू वास्तवमै तिनीहरू को हुन् भनेर जान्नुहुन्थ्यो किनकि उहाँले उनीहरूलाई आफ्नो आत्माबाट चिन्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं यो आत्माको साथ सहनुहुन्छ, तपाईं थाहा पाउनुहुनेछ जब तपाईंले सही व्यक्तिलाई देख्नुहुनेछ। म तपाईंलाई यो उपहारको साथ प्रार्थना गर्न प्रोत्साहित गर्दछु।
Fa. विश्वासी हुनुहोस्: केवल एक वफादार पार्टनर खोज्नुहोस्, एक वफादार पार्टनर बन्नुहोस्। तपाईले प्राप्त गर्न चाहानु भएको कुरा दिन तयार हुनुहोस्। संसार परिवर्तन गर्ने उत्तम तरिका पहिले आफूलाई परिवर्तन गरेर हो। यदि तपाईं बिना शर्त प्रेम चाहनुहुन्छ भने, बिना शर्त प्रेम दिनुहोस्, तपाईं सम्मान चाहनुहुन्छ भने आदर दिनुहोस्, यदि तपाईं उत्तम चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफूलाई उत्तम योग्यको बनाउन योग्य बनाउनु पर्छ।
• प्रभु येशू, म भाँचेको हृदय लिएर तपाईं समक्ष आएको छु, मेरो मुटु टुक्रा-टुक्रा भएको छ जसको मैले मेरो बाँकी जीवन बिताउने योजना गरेको थिएँ। यसबारे मैले समयको साथ प्रार्थना गरिसकें, म बिभिन्न आध्यात्मिक परामर्शका लागि गएको छु तर अझै एक दिन मेरो साथीले मलाई छोड्ने निर्णय गरे ।
• प्रभु, धेरै चोटि म किन यस्तो हुने गर्दछु भनेर सोच्न सक्छु, मैले सोचे कि हामी सँगै राम्रो छौं, मलाई लाग्यो कि मेरो प्रेमले हामीलाई निरन्तरता दिन पर्याप्त छ, तर म कहिलेसम्म गलत भएको छु। येशू, म तपाईंलाई अनुरोध गर्दछु कि मलाई जीवनको साथ अगाडि बढ्नको लागि अनुग्रह दिनुहोस्। अगाडि बढ्न शक्ति र सामर्थ्य दिनुहोस्, अझै पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्न अनुग्रह दिनुहोस् र उहाँसँग मेरा सबै प्रतिज्ञाहरू कहिल्यै त्याग्नुहोस्।
• म भगवानसँग बिन्ती गर्दछु कि तपाईले मलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न भन्ने परिस्थितिलाई नम्रतापूर्वक स्वीकार्न यो अनुग्रह दिनुहुन्छ, यस टुक्रिएको सम्बन्धले मेरो हृदयमा ठूलो चोट खडा गरेको छ र हरेक चोटि जब म यो घटना सम्झन्छु, मेरो दागबाट ताजा रगत बग्यो, मलाई येशूको नाममा मेरो दाग बाहिर पट्टि हेर्न अनुग्रह दिनुहोस्।
• हे भगवान, खाँचोको क्षणमा तपाईं मेरो हालको सहयोग हुनुहुन्छ, म यस टुक्रिएको सम्बन्धको पीडा र आघातबाट अभिभूत हुन चाहन्न। म कुनै मूर्खतापूर्ण निर्णय लिन चाहन्न किनकि कसैले मेरो मुटु तोड्यो। प्रभु येशु, म बिन्ती गर्दछु कि तपाईले मलाई दुख र आघात भन्दा बलियो बनाउनु हुनेछ जुन उसको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाले गर्दा भएको हो।
• हे भगवान, म तपाईंलाई अनुरोध गर्दछु कि तपाईंले आफ्नो प्रेमले मेरो मुटु महसुस गर्नुहुनेछ र तपाईंले मलाई विगतलाई बिर्सनुहुनेछ। किनकि जुनसुकै मलाई याद आयो, म मेरो हृदयमा तिव्र पीडा महसुस गर्दछु, प्रभु येशू, मलाई यसको बारेमा अब सोच्न मद्दत गर्नुहोस्। यो विगतको कुरा भएको छ, कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस् ताकि यसले मेरो वर्तमान जीवनलाई असर गर्ने छैन वा मेरो भविष्यलाई नष्ट गर्ने छैन।
• हे प्रभु येशू, मलाई तपाईंको आत्मा चाहिएको भन्दा पहिले तपाईंको आत्माले मलाई तपाईंको नजिक ल्याउँदछ, तपाईंको ठूलो मित्रताको भावना, मलाई डोर्याउने र मेरो अगुवाई गर्ने आत्मा। मलाई फेरि गलत हातहरूमा पर्न नदिनुहोस्, म सोध्छु कि जब मेरो मुटुको ढोका फेरि प्रेम गर्न थाल्छ, कृपया प्रभु येशू, कृपया यो सही व्यक्तिलाई होस्।
• प्रभु येशू, मलाई थाहा छ यो जीवनको एक चरण हो जुन अझै चाँडै समाप्त हुनेछ। प्रभु मलाई तपाईंको अभिभावक चाहिएको छ, मेरो पीडा मेरो भविष्यमा परिवर्तन गर्न सक्दिन। मलाई एक निर्णय नदिनुहोस् जुन तपाईं ममा निराश हुनेछ। मलाई प्रभुलाई सहयोग गर्नुहोस् कि मेरो टुक्रिएको सम्बन्धले तपाईंको सम्बन्ध बिग्रेको छैन र यसको विपरीत, मलाई निरन्तर तपाईंको बच्चा बन्ने अनुग्रह दिनुहोस्।
• प्रभु, म धेरै मानिसहरुका लागि प्रार्थना गर्दछु जो मेरो जस्तै दुर्घटनामा परेका छन, म तपाईहरुलाई उनीहरुलाइ बल दिनेछु भन्ने बिन्ती गर्दछु, तपाईले तिनीहरुलाई स्वीकार गर्न दिनुहुनेछ जुन उनीहरूले परिवर्तन गर्न सक्दैनन् र जीवनको साथ अघि बढ्न सक्छन्। तिनीहरूलाई नजिक र तपाईंको नजिक झिक्नुहोस्, ताकि शैतानले तिनीहरूको प्राण प्राप्त गर्न उनीहरूको वर्तमान कष्टको लाभ लिन सक्दैन। तिनीहरूलाई तपाइँमा साथी देखाउन बनाउनुहोस्, तपाइँमाथि भरोसा राख्न र विश्वास गर्न सक्षम हुन अनुग्रह दिनुहोस्। तिनीहरूलाई राम्रो भोलि हेर्न दिनुहोस् जुन उनीहरूलाई विगतलाई बिर्सन र जीवनको साथ अघि बढ्न मद्दत गर्दछ।
अघिल्लो लेखमाप्रार्थना बिन्दु दुश्मन को गतिविधिहरु को नष्ट गर्न को लागी
अर्को लेखमा२० गडबडमा आन्तरिक शान्तिको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू
एस्तर मार्च,, २०२० साँझ :26::2020
यसले मलाई परमेश्वर समक्ष असुरक्षित हुन मद्दत पुर्‍यायो र उसलाई सम्बोधन गर्न र करीब १ 18 महिनादेखि मलाई असर गर्ने र चोट पुर्‍याउने चोटपटक मुटुको चोट निको पार्न मद्दत पुर्‍यायो।
धेरै धेरै धन्यवाद! भगवान तपाईंको सेवा मा आशीर्वाद दिनुहोस्
Ng० प्रार्थना अभद्र आत्मा सम्बन्ध हटाउन
दुष्कर्महरू विरुद्ध प्रार्थना अंक